China fibre glass wool thermal insulation blanket blanket factory nabakhiqizi |I-Kingflex
I-fiber glass wool i-thermal insulation blanket
♦ Ukuvikela ukushisa nokugcina ukushisa
♦ Ukumuncwa komsindo nokunciphisa umsindo
♦ I-conductivity eqinile ye-thermal
♦ I-Hydrophobicity engekho ngaphansi kwama-98%, ukumelana nomswakama okuqhubekayo
♦ Ukusebenza okuhle kakhulu okungamelana nomlilo—I-CLASS A engashi
♦ Akukho ntuthu futhi akukho kukhishwa kwamagesi anobuthi
♦ Ngokuhambisana nemithetho yezakhiwo eziluhlaza
Ingubo ye-Kingflex Glass Wool Insulation ayishi, i-thermal kanye ne-acoustic insulation.Akukho kukhishwa kwamagesi anobuthi lapho kuvezwe emlilweni futhi ngaleyo ndlela kungenye yezinketho ezivumelana kakhulu nemvelo ekuhlukaniseni zonke izinsiza zokwakha.
I-aluminium foil ebheke ingilazi yokuvala ingubo yokufaka uboya izotholakala, nayo.
I-Kingflex Aluminium foil ebheke ngengubo yengilazi yoboya iwukuhlangabezana nesidingo semakethe samazinga aphezulu ezinto zokwakha eziluhlaza kanye nezokuvikela imvelo, futhi ugweme ukulimala kwe-formaldehyde, i-phenol nezinye izinto eziyingozi emzimbeni womuntu nendawo ezungezile.Ngaphezu kwalokho, ingubo yoboya yengilazi ye-Kingflex aluminium foil ingagcina ukusebenza okuhle kokushisa okushisayo noma ngabe isendaweni yokushisa ephezulu noma ephansi.
I-avareji ye-fiber dia
Ukunciphisa izinga lokushisa
I-coefficient yokumuncwa komsindo
1.03 indlela yokuguqula umkhiqizo 24kg/m3 2000HZ
Okuqukethwe kokufakwa kwe-slag
Ukucaciswa kanye nobukhulu
I-Glass Wool Insulation blanket
※ Isigaba A esingashayi umlilo
※ Alukho ushintsho kubukhulu esimweni sokuchayeka ekushiseni nakumswakama
※ Ungawi ngesikhathi, ukubola, ukukhunta, ukugqwala kuthinteke noma kufakwe i-oxidize.
※ Ayihlukunyezwa izimbungulu nama-microorganisms.
※ Ayidabuki ngesikhathi sokufaka isicelo noma incishiswa ngokumosha ngenxa yokucaciswa kwe-glasswool.
※ Ivumelana kalula nanoma yiluphi uhlobo lokhuni nophahla lwensimbi.
※ Ithathwe kalula ophahleni futhi isetshenziswe ngokusika.
※Iqinile ngokumelene ne-acidity.
※ Yehlisa ukusetshenziswa kukaphethiloli kwezakhiwo ngenani elibalulekile.
※ Isebenza njengokuhlukaniswa komsindo kanye nokuhlukaniswa okushisayo nesici sayo sokugcina ukudlidliza.
I-Kinflex glass wool insulation blanket ingasetshenziselwa ukwakha uphahla, izinhlelo ze-HVAC.
Uma isetshenziselwa ukufakwa ophahleni, ayidabuki ngesikhathi sokufaka isicelo noma inciphisa ngokumosha ngenxa yokucaciswa kwe-glasswool.Futhi ivumelanisa kalula nanoma yiluphi uhlobo lwezinkuni nophahla lwensimbi.Futhi ngenxa yokukhanya kwayo, ingayiswa ophahleni kalula futhi ifakwe ngokusikwa.Iqinile ngokumelene ne-asidi.Yehlisa ukusetshenziswa kukaphethiloli kwezakhiwo ngenani elibalulekile.
Uma isetshenziselwa izinhlelo ze-HVAC, izingubo zokulala ze-glasswool ohlangothini olulodwa zimbozwe ngocwecwe lwe-Aluminium olungangeneki.Iphinde isebenze njengokuhlukaniswa komsindo kanye nokuhlukaniswa okushisayo kanye nesici sayo sokugcina ukudlidliza.Ijazi le-Aluminium foil elinengubo yokulala yesimo somoya enokumelana okuphezulu kakhulu nokungena komhwamuko.Ikakhulukazi ezinhlelweni zokupholisa, lokhu kunamathela kwe-Aluminium foil kubaluleke kakhulu ngokumelene nengozi yokonakala kokufakwa ngaphakathi kwesikhathi.Kuvumela ukusetshenziswa okulula nokusheshayo ngezikhonkwane zayo zokuzibamba zokuzinamathela.
I-Kingflex glass wool insulation blanket ingasetshenziselwa ukufakwa kwe-Thermal nomsindo wamapayipi esimo somoya, izinhlelo zamandla elanga, uphahla kanye nezinhlelo ze-HVAC.
Okwedlule: ishidi lokufakwa komsindo elishisayo lokumuncwa
Olandelayo: i-fiber glass wool thermal insulation board
I-Blanket Insulation engcono kakhulu
I-Glass Wool Insulation izwakala nge-aluminium foil ohlangothini olulodwa
I-Glass Wool Insulation izwakale nge-FSK
I-Wall Insulation Philippines
i-fiber glass wool thermal insulation board